မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Geneham Pharmaceutical Co. , Ltd.
Rosemary ထုတ်ယူကဘာလဲ? ဘယ်လို antioxidative ဂုဏ်သတ္တိများကော?
ထုတ်ယူမှုသည် Rosemary (Rosmarinus officinalis Linn ။ ) မှဖြစ်ပြီးအလယ်ခေတ်ကစပြီး Alps တွင်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီးယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့ရှိရသည်။ Rosemary ကိုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ မွှေးကြိုင်သောအမွှေးအကြိုင်များ၊ အစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အလှကုန်များနှင့်ဆံပင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကျန်းမာရေးမမှန်မှုများအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုများ၌ပါ ၀ င်သောဓာတုလမ်းကြောင်းအတိအကျကိုမူမသိရှိရသေးပါ။
Carnosic အက်ဆစ်၊ Carnosol နှင့် Rosmarinic acid တို့သည်အစွမ်းထက် antioxidant လုပ်ဆောင်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသော Rosemary ထုတ်ယူမှုအရှိဆုံးဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။ Carnosic acid သည် multicvel cascade ချဉ်းကပ်မှုမှတစ်ဆင့် free radicals များကို deactivate တစ်ခုတည်းသော antioxidant တစ်ခုဖြစ်သည်။
"သဘာဝ antioxidants တွေကဒြပ်တွေထက်ထိရောက်မှုနည်းတယ်။ "
စာပေနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းလေ့လာမှုများအရ Rosemary Antioxidants များသည်ဗီတာမင်အီး (ဒြပ်စင်)၊ BHA, BHT, TBHQ နှင့်အခြားအရာများထက်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ဒါ့အပြင် Rosemary Antioxidants တွေဟာအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ပိုရှိတာကြောင့်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေပေါ်မှာသန့်ရှင်းတဲ့တံဆိပ်ကပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးဓါတ်မတည့်မှုလည်းမရှိပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့် Rosemary ထုတ်ယူယူ?
လူကိုအခမဲ့အစွန်းရောက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော antioxidants များစွာရှိသည်။ သို့သော် Rosemary ထုတ်ယူမှုတွင် antioxidants တစ်ဒါဇင်ကျော်ပါဝင်ပြီးနာတာရှည်ရောဂါများမှကာကွယ်မှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
•အားကောင်းသော antioxidant protection ကိုပေးသည်
• ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုအိုမင်းခြင်း၏ပုံမှန်သက်ရောက်မှုများမှကာကွယ်ပေးသည်
အဘယ်အရာကို Rosemary ထုတ်ယူဒီတော့အထူးစေသည်?
Antioxidants များသည် free radicals များကိုပျက်ပြယ်စေကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးသော်လည်း antioxidants အားလုံးသည်တူညီကြသည်မဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့် antioxidant သည်အစွန်းရောက်သောအစွန်းရောက်မှုကိုလွတ်မြောက်စေသည့်အခါ၎င်းသည် inert ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အတွက် antioxidant အဖြစ်အသုံးမပြုတော့ပါ။ သို့မဟုတ် ပို၍ ပင်ဆိုးသည်မှာ၎င်းသည်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်ကိုယ်နှိုက်ဖြစ်လာသည်။
ဒါက Rosemary ထုတ်ယူသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်မှာရှိပါပဲ။ ၎င်းသည် antioxidant လုပ်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှည်ပါသည်။ ၎င်းတွင် Carnosic acid အပါအ ၀ င် antioxidants များစွာပါ ၀ င်သည်။
Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
1-Deoxynojirimycin (DNJ) သည် Mulberry အရွက်နှင့်အမြစ်အခေါက်တွင် alkaloid တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ DNJ သည်ကျန်းမာသောဂလူးကို့စ်အဆင့်၊ Antiviral လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အရေပြားဆိုင်ရာဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်အသားအရေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
သုတေသနပြုချက်များအရ DNJ သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသကြားဓာတ်စုပ်ယူမှုကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေပြီးဂလူးကို့စ်ကိုများစွာလျော့ချစေရန်အတွက်၎င်းသည်သကြားဓာတ်၊ သကြား၊ အစားအသောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်သော။ ထို့အပြင် DNJ သည်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအမြှေးပါး glycoprotein ၏ဂလူးကို့စ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖယ်ရှားရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤအတောအတွင်း, နု glycoproteins ၏စုဆောင်းခြင်းဆဲလ်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အိမ်ရှင်ဆဲလ်အဲဒီ receptor အကြားစည်းနှောင်ပျက်ဆီးစေခြင်းငှါ, နှင့် cytostatic လှုပ်ရှားမှုအကျိုးရှိရန် MoLV ၏ပုံတူ deactivate မှဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်သဟဇာတဖွဲ့စည်းခြင်း
Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အဘယ်နည်း။
Mulberry Leaf သည်ရှေးဟောင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုးစာအရွက်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ ဗီတာမင်စီနှင့် antioxidants များပေါများသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများတွင်အမြင့်ဆုံးသည် Rutoside နှင့် DNJ (1-Deoxynojimycin) ဖြစ်သည်။ တရုတ်၏နောက်ဆုံးသုတေသနက Rutoside နှင့် DNJ သည်အဆီများကိုထိန်းညှိခြင်း၊ သွေးဖိအားကိုထိန်းညှိပေးခြင်း၊
Mulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin သည်လူသားတို့၏ Blood Lipid Profiles များအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
ပိုးစာအရွက်များသည် 1-deoxynojirimycin (DNJ) တွင်ကြွယ် ၀ သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာသောα-glucosidase အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ DNJ ကြွယ်ဝသောပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူမှုသည်လူသားတို့၏သွေးလွန်ဂလူးကို့စ်ကိုမြင့်တက်စေသည်ဟုယခင်ကကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ DNJ ကြွယ်ဝသောပိုးစာအရွက်များထုတ်ယူမှု၏သက်ရောက်မှုများကိုလူသားများတွင်ပလာစမာ lipid ပရိုဖိုင်းများအပေါ်အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ open-label တစ်ခုတည်းအုပ်စုတစ်စုလေ့လာမှုကန ဦး သွေးရည်ကြည် triglyceride (TG) အဆင့်≥200 mg / dl နှင့်အတူ 10 ဘာသာရပ်များအတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည် DNJ ကြွယ်ဝသောပိုးစာရွက်ဖြူပါသောဆေးတောင့်များကို ၁၂ မီလီဂရမ်တွင်တစ်ပတ်လျှင် ၁၂ ကြိမ်အစားအစာမစားမီသုံးကြိမ်သောက်သုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရသွေးရည်ကြည်၌ TG အဆင့်ကိုကျိုးနွံစွာလျှော့ချပြီး lipoprotein ပရိုဖိုင်းသည် ၁၂ ပတ်ကြာ DNJ ကြွယ်ဝသောပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူမှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကာလအတွင်း hematological သို့မဟုတ်ဇီဝဓါတုဗေဒ parameters တွေကိုအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်; DNJ ကြွယ်ဝသောပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများမရှိခဲ့ပါ
အနောက်နိုင်ငံများတွင်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်လူသိများသော Fenugreek သည်ကျန်းမာစွာသော testosterone ဟော်မုန်းကိုအားဖြည့်ပေးပြီးအားကစားခန်းမနှင့်အိပ်ခန်းတို့တွင်အားသာချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သူနာပြုအမျိုးသမီးများအတွက်နို့ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးအသည်းကိုကျန်းမာစေပါသည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုတိုးတက်စေရန်နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုနို့တိုက်သတ္တဝါအဖြစ် Galactagogue (နို့ထုတ်လုပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်) အဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ လေ့လာမှုများအရ fenugreek သည်ရင်သားကင်ဆာနို့ထုတ်လုပ်မှုကိုအားကောင်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ Fenugreek သည်ပုံမှန်ဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သွေးသကြားဓာတ်ထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းညှိရန်ရာစုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ လတ်တလောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ Fenugreek သည်ပန်ကရိယအားဖြင့်ဂလူးကို့စ်မှီခိုသောအင်ဆူလင်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများသည် Fenugreek ဂရိမျိုးစေ့များ၏ hypoglycemic ဂုဏ်သတ္တိများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်သကြားဓာတ်ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေခြင်းနှင့်အဆီကျခြင်းကိုလည်းအထောက်အကူပြုသည်။ Fenugreek အစေ့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
• Suppot သည်ယောက်ျား၏ကြံ့ခိုင်မှု၊ မောင်းနှင်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်
•ကျန်းမာသော glusoce ပမာဏကိုထားပါ
Furostanol saponins ကဘာလဲ?
fenugreek saponin အပင်များတွင် Furostanol saponins တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကို luteinizing hormone နှင့် dehydroepiandrosterone ထုတ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် testesterone level ကိုထိန်းထားရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားများ၏စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်၊ လက်ရှိလေ့လာမှုအရ ၄ င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော Furostanol saponins သည်ယခင် diosgenin saponin သည်တက်ကြွစွာပါဝင်သောအရာများတွင်အဓိကကျသည်။
အေရိုးဗစ်အားကစားသမားများသည် fenugreek saponins များကိုသောက်ပြီးနောက်သူတို့၏အစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလိုသူများအတွက်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကြွက်သားတည်ဆောက်မှုဖြည့်စွက်အရာများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သြစတြေးလျ Integrative Clinical and Molecular Medicine ဆေးပညာစင်တာတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ခြောက်ပတ်အတွင်းနေ့စဉ်နှစ်ကြိမ် fenugreek ထုတ်ယူမှုတစ်မျိုးကိုသောက်သုံးပြီး Placebo သောက်ခဲ့သူများထက် libido အဆင့်ကိုစစ်ဆေးသည့်စစ်ဆေးမှုတွင် ၂၅% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်စမ်းသပ်ပါ။ 20% ကျော်ကရာထူးတိုးခဲ့သည်။
4-hydroxyisoleucine သည်ပရိုတင်းဓာတ်မဟုတ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး၊ fenugreek အပင်များတွင်အဓိကအားဖြင့် fenugreek အစေ့များ၌အင်ဆူလင်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင် 4-hydroxy-isoleucine သည်ကြွက်သားဆဲလ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်သော creatine ကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားသန်စွမ်းမှုနှင့်ကြွက်သားထုကိုတိုးစေပြီးကြွက်သားဆဲလ်များ၏အင်အားနှင့်အရွယ်အစားကိုတိုးစေနိုင်သည်။
“ ဘယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးမလဲ”
ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းမ ၀ င်ခင်နှင့်ရောင်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးပေးမည်။
၄။ CoA, MoA, MSDS, Process Flow, Test Reports စသည့်နည်းပညာအချက်အလက်အပြည့်အစုံ